Messi Club – Page3– Just another WordPress site
ပြည်သူ့အချစ်တော် မင်းသမီးကြီး အန်တီချိုပြုံးရဲ့ လက်ရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေ See More ….
ပြည်သူ့အချစ်တော် မင်းသမီးကြီး အန်တီချိုပြုံးရဲ့ လက်ရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေ လည်ပင်းအကြိတ် ခွဲစိပ်ကုသမှုခံယူရန်အတွက် ဘန်‌ ကောက်မှာ ဆေးရုံတက်နေရတဲ့ ပြည်သူ့အချစ်တော် အန်တီချိုပြုံး ပြည်သူချစ် အနုပညာရှင် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အန်တီချိုပြုံးဟာ လည်ပင်းအကျိတ်ရောဂါကို ခွဲစိပ်ကုသရန်အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကို ရောက်ရှိနေတာပါဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆရာ ဦးဝင်းငြိမ်းက ချိုပြုံး ဆေးရုံတက်နေရပါပြီ။ မနက်ဖြန် လည်ချောင်းကအကျိတ် ခွဲရမယ်လို့ သမီးမိုးမိုးကပြောပါတယ်။ အားလုံးကချစ်တဲ့ ကောင်မလေးအတွက် ဆုတောင်း မေတ္တာ ပို့သပေးကြရအောင်ပါ ” လို့ သူလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာမှာ ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဆရာဦးဝင်းငြိမ်း​ရေးထားလို့ အ​မေချို ကျန်းမာ​ရေးအ​​ကြောင်း သိရတယ်။ စိုးရိမ်စရာမရှိဘူး ဆို​ပေမဲ့ စိတ်ပူမိတယ် ဘဝကို စိန်​ခေါ်မှု​တွေနဲ့​ ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အ​မေချို​ ဒီတခါလည်း​ ကျော်ဖြတ်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်တယ် ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းတဲ့အ​​မေချို မွန်းတည့်ချိန်မှာ​ နေမဝင်တတ်တာ​သေချာမှာပါလို့ […]
စမိုငျးလျဆိုတာနဲ့ပရိသတျမသိသူမရှိအောငျမွငျနသေူတဈယောကျပါ။ စီးပှားလောကမှာအောငျမွငျမှုတှနေဲ့ပရိသတျတှအေားကနြရေတဲ့သူတဈယောကျပါ။ ပြျောရှငျစရာမိသားစုဘဝလေးကိုလညျးပိုငျဆိုငျထားတာပါ။ သူမတို့မိသားစုဟာလကျရှိအမရေိကားမှာနထေိုငျနတောပါ။ မိသားစုစုံစုံလငျလငျနဲ့လညျးအမွဲပြျောရှငျစရာကောငျးတာပါ။ ဘဝကိုခကျခဲစှာကြျောဖွတျရငျးအခုမှာ ဖွဈခငျြတာတှမေလုပျလိုကျရတာတှကေိုဖွညျ့ဆညျးနရေငျးဘဝကိုဖွတျသနျးနတောပါ။ လယောဥျစငျးလုံးငှားပွီးလညျးခရီးလေးတှထှေကျလရှေိ့တာပါ အခုမှာလညျးသူတို့မိသားစုလေးဟာခရီးထှကျနတောဖွဈပါတယျ။ လယောဥျပျေါကဆငျးဆငျးခွငျးမှာတငျ vvipတှလေို့ဘေးကနေ လိုကျလုပျပေးနတေဲ့video လေးကိုလညျးပရိသတျတှအေတှကျတငျဆကျပေးလိုကျရပါတယျ။ စမိုင်းလ်ဆိုတာနဲ့ပရိသတ်မသိသူမရှိအောင်မြင်နေသူတစ်ယောက်ပါ။ စီးပွားလောကမှာအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ပရိသတ်တွေအားကျနေရတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုဘဝလေးကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတာပ သူမတို့မိသားစုဟာလက်ရှိအမေရိကားမှာနေထိုင်နေတာပါ။ မိသားစုစုံစုံလင်လင်နဲ့လည်းအမြဲပျော်ရွှင်စရာကောင်းတာပါ။ ဘဝကိုခက်ခဲစွာကျော်ဖြတ်ရင်းအခုမှာ ဖြစ်ချင်တာတွေမလုပ်လိုက်ရတာတွေကိုဖြည့်ဆည်းနေရင်းဘဝကိုဖြတ်သန်းနေတာပါ။ လေယာဉ်စင်းလုံးငှားပြီးလည်းခရီးလေးတွေထွက်လေ့ရှိတာပါ။ အခုမှာလည်းသူတို့မိသားစုလေးဟာခရီးထွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ လေယာဉ်ပေါ်ကဆင်းဆင်းခြင်းမှာတင် vvipတွေ့လိုဘေးကနေ လိုက်လုပ်ပေးနေတဲ့video လေးကိုလည်းပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ Crd
အသုဘအခမျးအနားသို့ လာရောကျသညျ့ဧညျ့သညျတှကေို မျောဒယျမလေးတှနေဲ့ ဧညျ့ခံပေးသညျ့အပွငျ ခေါငျးတလားပျေါတှငျလညျး ကောငျမလေးတှကေို See More…….
အသုဘအခမျးအနားဆိုသညျ့အကွောငျးကို ပွောလိုကျသညျနှငျ့ ဒါဟာအလှနျဝမျးနညျးဖှယျရာကောငျးသညျ့ဖွဈရပျဖွဈပွီး ဧညျ့သညျမြား၏ခံစားခကျြကိုပငျ ဝမျးနညျးမှုတှေ ရိုကျခတျစပေါတယျ။သို့သျောလညျး မကွာသေးမီးက တောငျအာဖရိကမှ အသုဘအခမျးအနားတဈခုကိုကငျြးပနပေုံဟာ လူအမြားကို အံ့သွမွငျသကျသှားစခေဲ့ပါတယျ။ ထိုဝမျးနညျးဖှယျရာ အခမျးအနားသို့ လာရောကျကွသညျ့ ဧညျ့သညျတှကေို မျောဒယျကောငျမလေးတှကေ အလနျးစားဖွငျ့ဧညျ့ခံပေးတာဖွဈပါတယျ။ထို့အပွငျ ခေါငျးတလား၏အပျေါသို့တကျရောကျပွီး ကောငျမလေးတှဟော အကွမျးစားကပွမှုတှဖွေငျ့ ကငျြစပခဲ့သေးတာဖွဈပါတယျ။ အဘယျကွောငျ့ ဒီလိုကငျြးပရလဲဆိုတာကို မသိရသေးပမေယျ့ ကငျြးပပွုလုပျပုံကတော့ အံ့အားသငျ့စခေဲ့ပါတယျ။ Shoon (Cele Daily) Zawgyi အသုဘအခမ်းအနားသို့ လာရောက်သည့်ဧည့်သည်တွေကို မော်ဒယ်မလေးတွေနဲ့ ဧည့်ခံပေးသည့်အပြင် ခေါင်းတလားပေါ်တွင်လည်း ကောင်မလေးတွေကို အလန်းစားကပြပြီး ဖျော်​ဖြေပေးသည့် ထူးထူးဆန်းဆန်းဈာပနာပွဲ အသုဘအခမ်းအနားဆိုသည့်အကြောင်းကို ပြောလိုက်သည်နှင့် ဒါဟာအလွန်ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာကောင်းသည့်ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး ဧည့်သည်များ၏ခံစားချက်ကိုပင် ဝမ်းနည်းမှုတွေ ရိုက်ခတ်စေပါတယ်။သို့သော်လည်း မကြာသေးမီးက တောင်အာဖရိကမှ အသုဘအခမ်းအနားတစ်ခုကိုကျင်းပနေပုံဟာ လူအများကို အံ့သြမြင်သက်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ ထိုဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ အခမ်းအနားသို့ လာရောက်ကြသည့် ဧည့်သည်တွေကို […]
အသုဘရုပ်အလောင်းကို ဆေးရုံကြီးအအေးတိုက်မှထုတ်ယူလာပြီး သေဆုံးသူရဲ့အိမ်သို့ပို့လိုက်သောအခါ..
အသုဘ ရုပ်အလောင်းကို ဆေးရုံကြီး အအေးတိုက်မှထုတ်ယူလာပြီး နာရေးကားပေါ်တင်၍ သေဆုံးသူရဲ့အိမ်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ မောင်းထွက်လာခဲ့တယ်။ အိမ်ရှေ့ကိုနာရေးကားရောက်လာတော့ မိဘကျေးဇူးတွေနဲ့ အယူသီးမှုတွေကို ခွဲခြားသိမြင်နိင်ပြီး သိပ်ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အမှန်တရား။ အသုဘရုပ်အလောင်းကို ဆေးရုံကြီးအအေးတိုက်မှထုတ်ယူလာပြီး နာရေးကားပေါ်တင်၍ သေဆုံးသူရဲ့အိမ်သို့ပို့ဆောင်ဖို့မောင်းထွက်လာခဲ့တယ် အိမ်ရှေ့ကိုနာရေးကားရောက်လာတော့ အလောင်းကိုအိမ်ထဲသွင်းမယ် လုပ်စရာရှိတာလုပ်မယ်ပေါ့ ကားပေါ်ကနေအလောင်းချမယ်လုပ်တော့ အိမ်ရှင်တွေကအပြေးရောက်လာပြီး မျက်ရည်လေးစမ်းတမ်းတမ်းနဲ့ ဆရာတို့ အိမ်ထဲအလောင်းမပြင်ဘူးနော် အိမ်ရှေ့မှာပဲအလောင်းပြင်ပေးပါနော်တဲ့ ” အမဘာဖြစ်လို့လဲ ” လို့ကျွန်တော်ကမေးလိုက်တော့… ဟိုလေ ” ဆရာ အပြင်မှာသေတဲ့အလောင်းကို အိမ်ထဲမသွင်းကောင်းဘူးတဲ့ အိမ်သားတွေခိုက်တက်တယ် တဲ့ ” ပြီးတော့ ရပ်ကွက်ကလဲမကြိုက်ဘူး ရပ်ကွက်နာတယ်တဲ့… ဟောဗျာ…”ဒါနဲ့အမ အခုသေတဲ့သူက အမနဲ့ဘာတော်လဲ လို့မေးလိုက်တော့ “… ဆရာ အခုဆုံးသွားတဲ့သူက ကျွန်မအဖေ ပါတဲ့. အော်…ဟုတ်ကဲ့ အမအဖေလား ဒါဆိုအိမ်ထဲအလောင်းမပြင်ဘူး အပြင်မှာပဲ အလောင်းပြင်မယ်ပေါ့ […]
(၁၈)နှဈအရှယျ မိနျးကလေးတဈဦး မိုဘိုငျးဖုနျးကို အားသှငျးရငျး ဖုနျးစကားပွောနစေဉျ အပူလှနျပွီး See more……
(၁၈)နှဈအရှယျ မိနျးကလေးတဈဦး မိုဘိုငျးဖုနျးကို အားသှငျးရငျး ဖုနျးစကားပွောနစေဉျ အပူလှနျပွီး… See more လှနျခဲ့သညျ့ နှဈအနညျးငယျခနျ့ကတညျးက မို ဘို ငျးဖုနျး ဘတျထရီမြားကွောငျ့ မီးလောငျမှုတှေ ပေါကျကှဲမှုတှေ ဖွဈခဲ့ဖူးတာကွောငျ့ ဖုနျးအသုံးပွုသူတှကွေားမှာ ထိနျ့လနျ့ခဲ့ရပါတယျ……. အဲဒီနောကျပိုငျးမှာ ဖုနျးထုတျလုပျတဲ့ ကုမ်ပဏီတှကေ သူတို့ရဲ့ ဖုနျးတှကေို သုံးစှဲသူတှအေတှကျ လုံ ခွုံစိတျခမြှုရှိအောငျ ပွုပွငျထုတျလုပျလာခဲ့ကွပါတယျ။ဒါပမေယျ့လညျး လတျတလောသတငျးတဈပုဒျအရ….. အိန်ဒိယနိုငျငံမှာ အသကျ ၁၈ နှဈအရှယျ မိနျး က လေးတဈဦး မိုဘိုငျးဖုနျးကို အားသှငျးရငျး ဖုနျးစ ကားပွောနစေဉျ ပေါကျကှဲမှုဖွဈစဉျကွောငျ့ သေ ဆုံးခဲ့ရပါတယျ။သတငျးအရ အသကျ ၁၈ နှဈအရှ ယျ Uma Oram ဆိုသူ…. မိနျးကလေးဟာ ဖုနျးအားသှငျးထားရငျး ဆှမြေိုးတှဆေီကို ဖုနျးဆကျစကားပွောနစေဉျ မ […]
ခေါင်းမှာ ဘောက်တွေ ထလွန်းလို့ စိတ်ညစ်နေရသူများအတွက် ဆေးနည်း…
ခေါင်း မှာ ဘောက် တွေဂျွတ်စွဲလောက်အောင် ထချင်သလောက်ထ ၊ စိတ်ညစ်စရာ မလိုတော့ ပါကျ နော် ဘောက်ဖြစ်နေတာ ကြာပြီ ဗျား ဘောက် ပျောက်ခေါင်း လျှေ်ရည် အစုံ သုံးကြည့်ပါတယ်။ ရှောက် နူ သီး / သံပုရာ သီး စသည် နည်းလမ်း များ ဖြစ်လုပ် ကြည့်ပေမယ့် တစ်ဖက်နိုင် ငံရောက် ကတည်း နေပူမိုးရွာ မရှောင်ပန်းရံ အလုပ်ဖြစ်နှစ်နှစ်တာ လုပ်ကာဂျွတ်စွဲနေ သည် ကျွန် တော် ခေါင်းက ဘောက် တွေက မပျောက်ခဲ့ဘူး ။ ကျွန် တော်အရမ်း စိတ်ညစ် ခဲ့ တာ ပေါ့ ဒါနဲ့ကတုံး ခနခန တုံး နေရတာ ပေါ့ […]
ခွဲစိတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတုန်း ကာမအမြတ်ထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ မိချိုရဲ့ အဖြစ်
ခွဲစိတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတုန်း ကာမအမြတ်ထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ မိချိုရဲ့ အဖြစ် “ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ….ကွယ်…” မိချိုတစ်ယောက်….ခွဲစိတ်ခံရန်အတွက်…ဆေးရုံတစ်ခု၏ ခန်းမတစ်ခုအတွင်းမှာဖြစ်သည် မိချို…….ဟာ တွန်းလှည်းကုတင်လေးပေါ်မှာ ပက်လက်ကလေးစောင့်နေရရှာတယ်။ သူမဟာ …ခွဲစိပ်ကုသခံရမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အဝတ်အစားမပါ ..ဗလာကိုယ်တီးနဲ့ ဖြစ်နေလို့ စောင်ဖြူပါးလေးနဲ့ ချုံလွား..ပေးထားကြတယ်။ ခဏနေတော့ ….ဝတ်ရုံအဖြူကြီးဝတ်ထားတဲ့ လူတစ်ယောက် အခန်းအတွင်းဝင်လာပြီး… သူမကိုလွားခြုံပေးထားတဲ့ စောင်ပါးလေးကို မ, ကြည့်တယ်။ ပြီးတော့ ပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံးနဲ့ ပြန်ထွက်သွားတယ်။……. တစ်ခါ…ခဏနေပြန်တော့ ခုနလူ ဝင်လာပြီး…… စောင်ကို မ, ကြည့်ပြန်တယ်။ ပြီးတော့ ပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံးနဲ့ ပြန်ထွက်သွားပြန်တယ်။ အဲ…မကြာပြန်ဖူး… ခုနလူပဲ… တတိယအကြိမ်အခန်းထဲပြန်ဝင်လာပြီး စောင်ကို မ, ကြည့်ပြန်တယ်။ ဒီတခါတော့.မိချိုက…မနေနိုင်တော့လို့…..မေးတယ်… … “ဒေါက်တာ၊ ကျမကို မကြာခင် ခွဲစိပ်ကြတော့မှာ မဟုတ်လား ဟင်…” […]
၁။ အပျိုတွေ တံမြက်စည်း ကျော်မိရင် အိမ်ထောင်မကျခင် ဗိုက်ကြီးတတ်ပါတယ်။ ၂။ အပျို၊ လူပျိုတွေ ခြေဖျား‌ပေါ်ကျော်ပြီး တံမြက်စည်း ခတ်မိရင် အဲ့ကလေးတွေ အိမ်ထောင်မကျတော့ပါဘူး။ တံမြက်စည်းကို တံတွေးနဲ့ ပြန်ထွေးခိုင်းပါ။ ၃။ အိမ်နီး ခြံနီးချင်းတွေ ကိုယ့် အိမ်/ခြံဝကစပြီး တံမြက်စည်း လာလှည်းသွားရင် ဝင်မယ့်လာဘ် မဝင်တော့ပါဘူး။ သူ့အိမ်‌ဝက ပြန်လိုက်လှည်းယူပါ။ ၄။ တံမြက်စည်းသစ်နဲ့ အိမ်ထဲက အိမ်ပြင် စ မလှည်းရပါဘူး။ ပစ္စည်းတစ်ခုခု အိမ်ဝချပြီး အိမ်ထဲ အရင်လှည်းထည့်ရပါတယ် ၅။ ကိုယ့်မိသားစုတွေအကုန် ကံဆိုး‌နေတယ်ထင်ရင် ရှေ့၊ နောက် အိမ်တံခါး‌တွေဖွင့်ထားပြီး အိမ်ရှိလူကုန် အိမ်လယ်ကစ ရှေ့‌နောက်အ‌ပေါက်ဘက်ကို တံမြက်စည်း လှည်းခိုင်းပါ။ ၆။ အိမ်ဝင်တံခါးမှာ တံမြက်စည်း ကန့်လန့်ဖြတ်ချထားရင် မကောင်းတဲ့ ဝိဉာဉ် […]
လိုင်းပေါ်မှာ လူပြောများနေတဲ့ အတွဲ အကြောင်းကို စပ်စုလိုက်သောအခါ….
လိုင်းပေါ်မှာ လူပြောများနေတဲ့ အတွဲ အကြောင်းကို စပ်စု လိုက်တာ အဖွဲ့တွေ မှ အမျိုးမျိုး ကွဲ နေ ကြ တာသတိထားမိတယ် ။ ၁။ ဒီအရွယ်ရောက်တာတောင် လင်စိတ်သားစိတ် မကုန်သေးဘူးလားဆိုတဲ့အဖွဲ့ရယ် ။ ၂။ ငါတို့များတော့ ရှိတဲ့ဟာတောင် ပြန်အမ်းချင်နေတာ ဆိုတဲ့ လင် စိတ် သားစိတ် ကုန်ခမ်းနေသူတွေက တစ်ဖွဲ့ရယ် ။ ၃။ ဒီအရွယ်ကို ဟယ် ဘုရား တရားနဲ့ နေရမှာ ဆိုတဲ့ ဘုရားဒကာတစ်ဖွဲ့ရယ် ။ ၄။ အဖွားကြီးက ချမ်းသာလို့ အပိုင်ကြံတာ တစ်နေ့ ဒုက္ခ နဲ့ လှလှတွေ့တော့မှာပဲ ဆိုပြီး အနာဂါတ် အကြားမြင် ဆရာကြီးတွေက တစ်ဖွဲ့ရယ်။ ၅။ သြော် ဖူးစာ […]
မဟာတန်း ကျောင်းသူလေး အသုဘ မီးသင်္ဂြိုလ်ခါနီး မိခင်မှ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ နမ်းလိုက်တဲ့အချိန် ဒီဖြစ်ရပ်မျိုး မကြုံရလေအောင်…
မဟာတန်းကျောင်းသူလေးအသုဘမီးသင်္ဂြိုလ်ခါနီးမိခင်မှနောက်ဆုံးအနေနဲ့နမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ..ဒီလိုဖြစ်ရပ်မျိုး မကြုံရလေအောင် တိုးတက် ခေတ်မီ ချင်တဲ့နေရာမှာလိုသလိုဆွဲယူ ခေတ်မီ နေကြပြီး ရှေးဟောင်း အယူသည်းမှုတွေ ကိုတော့မပစ်ပယ်နိုင်ကြသေးဘူး သေရွာပြန် လူတစ်ယောက်ကို လူနေရပ်ကွက်ထဲ ပြန်ဝင်ခွင့် မပြုနိုင်ဘူးဆိုရင် အသုဘလိုက်ပို့တဲ့ လူတွေပါ ရပ်ကွက်ထဲ ပြန်မ ဝင်ခိုင်းပါနဲ့။ သူတို့တွေလည်း သင်္ချိုင်းကုန်းကို ရောက်ခဲ့ကြတာပဲလေ။လူကို လူလို့ပဲမြင်ပြီး လူ အဖြစ် ပြန်အသိမှတ်ပြုပေးရမှာပေါ့။ ကံကောင်း လို့ မသေပဲ အသက်ရှင်လျက် ပြန်ရရှိလိုက်တဲ့လူတစ်ယောက်ကို ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဘာလို့ မကြိုဆိုနိုင်ကြတာလဲ။ ဘာလို့များ လူ့ အသိုင်းအဝိုင်း ကို ပြန်ဝင်ခွင့် မပြုချင်ရတာလဲ။ ကဲ ~ မလိုတဲ့ အယူအဆတွေ ပယ်ကြရအောင်ဗျာ။ မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီ၁၅ မိနစ်ခန့် မန္တလေး ကြာနီကန် သုဿန်မှာ ဖြစ်ပွါးခဲ့သည့် ကုန်ထုတ် […]